Archive du 20200825
Depiote Brunelle « Mila fanadihadiana ny raharaha Farafangana »
Mampivarahontsana ny maheno ny isa hoe 21 no namoy ny ainy. Mora loatra ilay famonoana olona, ary mpitandro filaminana aho no miteny an’izany, hoy ny
Mpanolotsaina monisipaly TIM “Manararao-pahefana ny ben’ny tanàna”
Miha mafana ny fifandirana eo amin’ny fitantanana ny tanànan’Antananarivo
Antoko mpihira Taratry ny Mazava Miantso ny Malagasy hifankatia
Amin’ny maha mpitory ny filazantsara dia ny fitondrana am-bavaka ny firenena mba ho afaka anatin’izao areti-mandripaka izao tao anatin’izay 5 volana izay no tena nimasoanay,
Antenimieram-pirenena Banga roa ny toeran’ny solombavambahoaka
Hivory tsy ara-potoana ny Antenimieram-pirenena manomboka rahampitso alarobia 26 aogositra 2020 araka ny tatitry ny filankevitry ny Minisitra ny alakamisy 20 aogositra 2020.
Fitondrana Rajoelina Diso fahavalo hatrany
Mila mamerina ny fifampitokisana eo amin` ny vahoaka sy ny fanjakana ny mpitondra.
Minisitry ny atitany Nisy nitory eny amin’ny Filankevi-panjakana
Nametraka fitoriana ny Minisitry ny Atitany sady Filohan’ny CCO Covid-19 teny amin’ny Filankevi-panjakana ny Fikambanana Antoko politika sy olon-tsotra notarihin-dry Joseph Yoland loholona teo aloha omaly.
JIRAMA Hifarana amin’ny 19 septambra ny fanoloana fantson-drano
Mitohy ny asa fanoloana fantson-drano tranainy sy manary rano iarahan'ny JIRAMA sy ny orinasa TRG International avy atsy Afrika Atsimo manatanteraka.
Amoron’i Mania Namboly Accacia ny any Fandriana
Praogramam-panjakana ankehitriny ny hamerina an i Madagasikara ho Nosy Maitso hananantsika Tontolo iainana
Masoivohon’i Monaco Hifantoka amin’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza
Ao anatin’ny tanjona ny amin’ny hampaharitra ny fiaraha-miasa efa mipetraka eo amin’ny hopitalin’ny reny sy ny zaza eny Ambohimiandra sy ny masoivohon’i Monaco eto Madagasikara,
Samy manao izay tiany
Samy manao izay reviny, hoy ny fitenin’ny tanora izay. Rehefa mijery ny fiarahamonina Malagasy amin’izao fotoana izao tokoa dia toa samy manao izay tiany daholo amin’ny ankapobeny manomboka any amin’ny mpitondra ka hatrany amin’ny vahoaka isanisany.
Taxibe eto an-drenivohitra Tsy hisy intsony ny tapa-dalana
Tsy hisy intsony ny saran-dalana tapa-dalana toy ny 200 sy ny 300 Ar manomboka izao fa tsy maintsy 500 Ar avokoa no alohan’ny mpandeha iray na dia mandingana tobim-piantsonana iray fotsiny aza.
Fiverenan’ny fitaterana Misimisy ihany ireo fepetra tsy maintsy arahana
Nitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika ireo fepetra ho an’ny fitaterana ny Minisitry ny Fitaterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetr’andro, Ato Joël Randriamandranto omaly tao amin’ny TVM .
Tsaradia Hamafisana ny fepetra sy fiarovana ara-pahasalamana
Vonona hanatanteraka sidina ny kaompania Tsaradia araka ny toromariky ny Filoha Rajoelina.
Fanadinana teknika Hanomboka ny 14 septambra izao
Navoakan’ny minisitry ny fampianarana tekinika vaovao, Ernest Tsikel’Lankina, ny daty hanaovana ireo fanadinana tekinika eto Madagasikara ho an’ity taona 2020 ity.
Fiverenan-dakilasy Malalaka hanapa-kevitra ny sekoly tsirairay
Andro sisa no isaina dia higadona ny fanadinam-panjakana. Izany hoe fotoana ny famerenan-desona izao ho an` ireo mpiadina na an-trano izany na an-tsekoly.
Fonja vaky tao Farafangana Voafonja 22 no mbola karohina
Mitohy ny fikarohana ireo voafonja nitsoaka tao amin’ny fonjaben’i Farafangana ny atoandron’ny alahady 23 aogositra 2020.
Ambatofotsy sy Andramasina Frezy 15 kg isan’andro sisa no lafon’ny mpamboly iray
Mahatratra 1 taonina isan’andro ny vokatra frezy miakatra eto an-drenivohitra avy any Ambatofotsy sy Andramasina.
Fiarahamonina Malagasy Lasa tahaka ny mihinam-bary ny mamono olona
Gadra maro no tafavoaka ny fonjan` i Farafangana ny alahady lasa teo. Taorian` ny hazalambo nataon` ny mpiandry fonja sy ny mpitandro filaminana, nandriaka ny rà ka maty voatifitra ny 20 tamin`ireo.
Toliara Mpirahavavy niharan’ny fanararaotana ara-nofo
Mirongatra ny fanolanana ankizy ao Toliara. Nanomboka tamin’ny volana martsa teo no mankaty ohatra dia miisa 26 ireo tranga nisy ka ny 6 tamin’ireo dia tamin’ity volana Aogositra ity avokoa.
Vatsy tsinjo - Boriborintany faharoa Nidina nanara-maso minisitry ny filaminam-bahoaka
Ny Polisim-pirenena no niandraikitra ny fanisana ireo olom-pirenena eny amin'ny boriborintany faharoa mahaksika ny fanomezana sosialim-bahoaka ho an'ny mponina eny an-toerana.
Dr Fidy Bariniaina “Mila miomana foana isika”
Nisy tenin’ny filoham-pirenena, raha tena nihaino azy isika, hoy ny Dr Fidy Bariniaina, dia ilay hoe ny fandraisan’andraikitry ny isam-batan’olona no antoka handresentsika ny COVID 19,
Coronavirus 788 sisa tsaboina, 74 ireo marary mafy
Niampy 75 ireo olona mitondra ny coronavirus hita tamin’ny fitiliana 420, izay manome taham-pahavoazana 17,85%.
Mararin’ny CTC Ivato Voalohany amin’ireo afindra eny Mahamasina
Ireo mararin’ny Covid 19 eny amin’ny ivon-toeram-pitsaboana momba izany eny Ivato na CTC Ivato no voalohany amin’ireo afindra eny amin’ny CTC Mahamasina, raha ny fandaminana fantatra omaly.
Ihosy Mahatra 85 000 ar ny vidim-panafody hitsaboana Covid-19
Na dia be aza ireo olona ahiana ho mitondra ny tsimokaretina covid-19 “cas suspect” any Ihosy Faritra Ihorombe dia mbola tsy ahitana fitaovana fanaovana fitiliana azy ity any amin’ny CRCO Ihorombe mandraka ankehitriny ary tsy mbola misy toerana hitsaboana ny aretina coronavirus ihany koa.
Tahotry ny Covid 19 Nihena antsasa-manila ireo mpanome ra
Nihena an-tsasa-manilabe izao ny isan’ireo olona mpanome ra antsitra-po tonga manatona eny amin’ny CNTS HJRA Ampefiloha, nandritra ny fihibohana, raha ny fanazavan’ny profesora Alison Oliva Rakoto, talen’ny hôpitaly.
Raharaha « écran plat 216 tapitrisa » Hafa ny resaky ny PNUD, hoy ny Transparency International
Tsy mbola vita eo ny resaka “écran plat” nahasaringotra ny minisitry ny atitany sady Filohan’ny CCO Covid-19, fa mbola mitohy, raha ny fanehoan-kevitry ny Transparency International Initiative Madagascar (TI-IM), izay nanapa-kevitra hanontany ny PNUD.
Antananarivo sy ny manodidina Maro no efa tsy mivaky loha amin’ny Covid 19
Tena efa mitombo ny olona tsy manao arotava eny an-dalana Amin’izao fotoana izao, raha ny zava-misy amin’ny ankampobeny eny rehetra eny.
Coronavirus Ny lehilahy no betsaka voa eto Madagasikara
Efa eo am-pamolavolana ny sokajin’isan’ireo marary azo nandritra ny fihibohana no mankaty nateraky ny fiparitahan’ny tsimok’aretina Covid 19 ny eo anivon’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka.